काेराेना बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कबिनै उपचार गर्ने प्रविधि भित्रियो - Mero samachar
‘काेराेना बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कबिनै उपचार गर्ने प्रविधि भित्रियो’
२५ चैत, धनगढी । व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) लगायतका उपकरण अभाव भएपछि यतिबेला स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भाइरस सर्छ कि भनेर सामान्य उपचार गर्न पनि हिच्किचाइरहेका छन् । कतिपय निजी अस्पतालले त असुरक्षित भएको भन्दै शंकास्पद बिरामीलाई उपचार गर्नै मान्दैनन् ।
तर, कैलालीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले भने बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कबिनै सुरक्षितपूर्वक उपचार गर्ने प्रविधि भित्राएको छ । बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कबिनै उपचार गर्न सकिने कोभिड–१९ टेस्टिङ बुथमार्फत अस्पतालले उपचार थाल्दैछ ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका प्रवक्ता डा. जगदीश जोशीले बुथ सुरक्षाका हिसाबले राम्रो भएको बताए । डा. जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘टेस्टिङ बुथ हिँजो साँझ आइपुग्यो । सुरक्षाको हिसाबले राम्रो लाग्यो । त्यसलाई आजबाट प्रयोगमा ल्याउँछौं ।’
बुथले पीपीईको बढ्दो माग र अभावलाई कम गर्न मद्दत केन्द्रका वैज्ञानिक सुमन पौडेल बताउँछन् ।
कोरोनाको प्रकोपपछि प्रविधि भित्राएको केन्द्रले १/२ दिनमै यस्ता बुथ निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ ।